Mai Chibwe VekwaZimuto: Murume asina Confidence
Kaa wawanikwa nomurume asina Confidence pamaitire ake semurume,uchaona kutimumba menyu ndiwe unofanira kuita mazano eupenyu asi unofanira kuita wakachenjeranokutivarume vakadai vanokwanisa kukuremadza.
Murume asina Confidence pamaitire ake anda kuti vanhu vembhuri yake vazive kuti iye ndiye murume, kuita sokuti pese apa vange vasingazivi kutimurume here kana kutimukadzi. Anoda kugaroyeuchidza mukadzi wake kuti iye ndiye mukuru wemusha. Unohwa achitobvunza mukadzi wake kuti Anopfeka tirauzi munomumba ndiwe here kana kuti ndini? Zvinoreva kuti haatombohwisisi kuti kana vanhukadziwovanokwanisa kungopfeka tirauzi asi kupfekwa kwetirauzi hakuitisi munhu murume kana mukadzi. Kutiupfeke chero chawapfeka unenge watogara urimukadzi/murume nechekare.
unohwa murume mukuru achikuverengera Bhaibheri kwahi zvakahi 2Mukadzi muviri wako hausi wako wega ndewedu tese.” Kuita sokuti iwe wambomurambira. Iye ega anoziva uti unyanzvi wekuvatana haadi kudzidza saka ava kuda kukuitisa Saikoroji yokuti chero usinganakigwi ubvume kuvata naye chete.
Iwe hauna kumbotii hauchadi, wakangoti unodawo kunakigwa sezvaanoita iye saka ava kutya kuti pamwe ungazoramba ndosaka ava kukuverengera. Asi paya pakahi “Varume idai vakadzi venyu.” Haachadi kupaverenga nokuti panozomuudza kutirudo kana guripo zvinofamba sei.
Mukaenda kuChechi unohwa murume wako iota nharo nevanhu vakuru vemuchechi kwahi mukadzi ane bas airi neiri neiri. Mava kumba ukamuti akuratidze muBhaibherikuti akazviverenga papi unohwa kuti haachazivi asi zvirimo. Kuda kukupa saikoroji yokumuitira zvaanoda chero paadira iye asina RESPONSIBILITY yokukuitirawo zvaunoda chero kamwe chete pavhiki.
Murume asina Cnfidence ukambodawo kuenda pamusoro pake pakuvatana anokuudza kut wava kuda kuzviita murume mumba. Kwahi pamusoro ndeemurume chete. Anofunga kuti kuva pamusoro pakuvatana ndizvo zvinoratidza kuti murume. Haahwisisi kuti kuva murume hunge une chokupinza mumukadzi zvisinei nemaitire enyu musi wacho.
Murume asina confidence anorega vana vachiziya nezhara akamiririra kutimukadzi asvike kumba kubva pagwendo. Anofunga kuti kubika zvinomuita mukadzi. Haahwisisi kuti kubika chinongovawo chinhu chinoitwa navanhu kuti vararame. Hakuna munhu akambochinja akkaita mukadzi achiti nokuti abikira vana vake.
Murume asina Confidence akangopopotedzana nomukadzi unohwa opembedza nyika yese achiudza hama dzake kutimukadzi wake haamutereri kuita sokutimukadzi wake chimwana chidiki chinoudzwa zokuita nababa kana mai. Haahwisisi kutimukadzi munhu mukuru ane fungwa zvokuti anokwanisa kufunga kumudarika zvinova zvinokwanisa kuvaka muusha wenyu.
Murume asina Confidence ukangoita sokuda kudzidza kumupfuura matova nedambudziko pamusha. Unkwanisa kutorambwa chero uchimuda sei. Kwahi kudzidza ndekwevarume chete. Iwe ukatoda kubvunza kuti kana kuri kwevarume chete wadii kuchiramba uchidzidza kutindisambokubata kana kukupfuura, unohi wava kutomushora.
Murume asina confidence anoti ukawana basa rinopa mari yakapfuura yake kwahi usagamuchira basa rakaaro nokuti unozoda kuita murume mumba. Kutoti bodo, mari ndeyedu tese saka rega ndiite, kwah hazviiti, murume ndiye anofanira kutambira mari kupfuura mukadzi nokutimukadzi haafaniri kuita njere. Kana ukatanga bhizinesi rako ukaona wava kuwana mari yakawanda kumupfuura, chitoona kuti unovanza imwe mari nokuti ungarambwa.
Murume asina Confidence ukamupindura paanokupa zvirongwa zvake zvisina musoro anokurova nokuti haadi kuti uve munhu anofungawo chimwe chinhu kuzhe kwekuti murume ndiye ega anobvumigwa kutaura.
Murume asina Cofidence, kana waroorana naye anochinja upenju hwako kusvika pakuti akasakuuraya, iwe unozviuraya nokuti haasi munhu wekugara naye. Hapana chimwe chinhu chimwe mumba chaungati anoita zvakanaka. Zvese zvaanoita ingari yokuti ndizvo zvaakakura achiona vabereki vakke vachiita. Ukaita vana naye, vana vako ndizvozvavachaita kana vakura nokuti vanenge vakura vachiona maitire enyu mumba. Ukaona murume waunoda kuroorana naye achiita zvimwe zvezvizvi musati maroorana, siyana naye utsvae umwe ane njere.
Kuva munhu ane mush chinhu chikuru zvokuti hauna nguva yokuswerodanana nevanhu vasina chavo muupenyu.
Posted by Mai E Chibwe at 01:09